I-UIP1000-Exd - 1.0kW ATEX Mixer ye-Ultrasonic - iHielscher Ultrasound Technology
I-UIP1000-Exd (20kHz, 1000W) yenzelwe i-ultrasonication yeziphuzo ezivuthayo, isb. Izivunguvungu ezindaweni eziyingozi (ATEX). It isetshenziselwa izinhlelo zokusebenza, ezifana Emulsifying, Ukuhlakazeka & i-particle kahle, noma I-homogenizing.
I-ATEX eqinisekisiwe ye-UIP1000-Exd yenzelwe izicelo ze-ultrasonic processing ezindaweni eziyingozi.I-UIP1000-Exd iqinisekiswe yi-ATEX ngokuhambisana ne-DIN EN 60079-0, 60079-1 no-60079-11 (i-EU-Standards II 2G Ex de IIA T4 ATEX no-II 2G Ex de ib [i] IIA T4 ATEX ). I-UIP1000-Exd iyi-keykey ultrasonication system yenqubo R&D noma ukuqhutshwa kwezimboni.
I-transducer, futhi iseli lokugeleza lenziwe ngensimbi engagqwali. I-sonotrode yenziwe nge-titanium. I-UIP1000-Exd inezici zokusebenza ezifanayo nezinhlelo zokusebenza njengeziyisisekelo I-UIP1000hd. Ngenxa yokwakhiwa kwalobufakazi bokuqhuma kungasetshenziselwa ukuxuba okuhambisana kahle nokusabalalisa kwezinto ezincane, isib. ukukhiqizwa kwe-biodiesel noma i- Ukuhlakazeka of solvent based upende noma inks. I-flow geometry yeseli ingashintshwa kalula kuzinqubo zokusebenza ngokuvumelana kwephayiphi / ukuxhumeka kwekhasi, ivolumu yangaphakathi noma usayizi we-sonotrode. Yiqiniso, isisindo sokugeleza singcindezela kuze kufinyelele ku-5.9barg (100psig) ukuze usebenze ngamandla aphezulu e-cavitation. I-flow cell isetshenziselwe ukulawula ukushisa ngesikhathi se-ultrasonication.
Igesi lokugeleza likhona ngaphakathi kwekamelo elingenalutho lokukhipha umsindo. Amandla okucubungula okujwayelekile webanga le-UIP1000-Exd kusuka ku-1 kuya ku-5m³ (ama-220 kuya ku-1100 amalitha) ngosuku. I-UIP1000-Exd yakhelwe ukufuna isikhala esincane kakhulu. Uhlelo oluphelele lwe-ultrasonic luyi-1.7m (67 ngamasentimitha) phezulu kanti isinyathelo esiphezulu siphezulu. 0.25m² (2.7sqft). Iyunithi yokusebenza ye-ultrasonic inesisindo esingu-110kg (243lbs). I-UIP1000-Exd iyatholakala ku-115V ~ noma ku-230V ~ (isigaba esisodwa).
Umklamo wokuqhumisa wenza i-UIP1000-Exd idivayisi ephelele ye-ultrasonic ekwenzeni amapende, ama-varnishes, ama-inks, ama-coatings nezinye imikhiqizo yamakhemikhali. Izinhlelo ezengeziwe zifaka phakathi ukucubungula kwamafutha (isib Biodiesel) noma izinhlelo zokusebenza zokwelapha (isib. i-Hexane esekelwe Ukukhipha).
I-Industrial Ultrasonic Processor UIP1000-Exd 1000 watts
imvamisa ye-ultrasonic ye-20kHz, uhlelo lokuzenzakalela lwe-frequency tuning, i-amplitude engu-25 micron, i-amplitude eguqulwa kusuka ku-50 kuya ku-100%, ukusebenza okumile okuvikelwe, nge-interface yokulawula okude noma ukulawula kwe-UPC, i-3m cable transducer ku-generator, ngamathuluzi aphakamisayo, i-transducer kanye ne-generator ubufakazi bokuqhuma (ATEX, FM), titanium phondo ngentambokazi ye-M14x1 System: approx. (LxWxH) 435x575x1700mm, 110kg
Isibonelo sokuqinisekiswa kobuchwepheshe bokuqinisekisa ubuchwepheshe
I-IBExU08ATE1016 (X) for transducer for ultrasonic iprosesa hlobo UIP1000T-Ex
I-IBExU08ATE1017 (X) for generator for ultrasonic prosesor UIP1000G-Ex
UIP1000-Exd ATEX uhlelo oluqinisekisiwe lwe-ultrasonic
I-Generator ye-UIP1000-Exd ne-Transducer
Isiqondiso se-ATEX 94/9 / EC
Isiphathimandla se-IBExU Certifying Authority